China Rubber Roller orinasa sy mpanamboatra | fahefana
Amin'ny maha-mpanamboatra kodiarana mahazatra vita amin'ny kofehy any Shina, dia manome rojom-borona isan-karazany amin'ny sehatra samihafa izahay.
1. Fitaovana:Manangana fitambaran-tsiranoka noforonina manokana nafarana avy any Etazonia sy Alemana mba hamokarana karazan-tsarimihetsika vita amin'ny fingotra. Vary voajanahary, fingotra Nitrile, Neoprene, Butyl, EPDM, Polyurethane, Silicone, Fluorine sns.
2. Famokarana:Tena henjana amin'ny fizotry ny famokarana. Ny vokatray manana teknolojia famokarana be pitsiny sy kalitaon'ny vokatra tsara, eken'ny mpampiasa anatiny sy ny vahiny. Ny orinasa dia nanjary singa voatokana ho an'ny varotra fingotra amin'ny orinasa fanontana lehibe maro.
3. Fanaraha-maso kalitao: Voamarina mazava tsara miaraka amin'ny fitaovana famokarana laser vita amin'ny rozika vita amin'ny PSF.
4. fonosana:Raisinay ho rohy lehibe ny fonosana. Ny fonosana mitandrina sy mety dia zava-dehibe tokoa mba hiantohana ny toe-javatra tsara sy ny fahombiazan'ny fanaterana ireo horonana vita amin'ny fingotra.
5. Misafidy antsika:Ny finiavana matihanina sy ny fahatsoram-po amin'ny fo manontolo, Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. dia natokana hamokarana rollers fingotra avo lenta manakaiky ny filan'ny vanim-potoanan'ny siansa sy ny teknolojia. Na inona na inona karazana roller fingotra nofidianao dia azonao antoka ny mahita ilay fahatokisana. Tena henjana tokoa izahay amin'ny fizotran'ny famokarana fingotra, ary miantoka ny faharetana avo lenta sy azo itokisana amin'ny fitsinjovana ny ezaka mba hanatsarana ny fomba fiasa sy ny fampidirana ireo tanjaka ara-teknika amin'ny lafiny rehetra.
6. Karazan-toetra samihafa amin'ny famolahana fingotra
- Rolling Rubber voajanahary - malefaka tsara sy tanjaka mekanika, fanoherana alkali tsara ho an'ny lamba, taratasy vita amin'ny hoditra, fitaovana famonosana, toy ny compactor sy metallurgy, karazana fitrandrahana ary indostrialy hafa.
- Nitrile roller roller - fanoherana solika tsara, ary mahazaka fanoherana, fanoherana fahanterana, fanoherana ny hafanana dia tsara ihany koa ho an'ny fanontana, fanaovana pirinty ary fandokoana, fibre simika, taratasy, fonosana, fitaovana fanodinana plastika ary fifandraisana hafa amin'ny solika hydrocarbon sy solvent ..
- Neoprene Roller - fanoherana mahery vaika, fanoherana afo avo, fanoherana fahanterana, fanoherana hafanana tsara, fanoherana menaka ary masinina asidra sy harafesina ho an'ny PCB, plastika, hoditra, fanontana, vy vy indianina, milina fanosotra mahazatra.
- Roller fingotra Butyl - fanoherana avo lenta amin'ny solvents simika, fanoherana hafanana tsara (170 ℃), asidra tsara ary ampiarahina amin'ny milina fanontam-pirinty, milina fanamainty, fitaovana fanosotra.
- EPDM roller roller - fanoherana tsara ny fahanteran'ny ozone sy ny fanoherana ny toetr'andro, ny mari-pana miasa dia mety manomboka amin'ny -65 ℃ ka hatramin'ny 140 ℃ amin'ny asa maharitra, fampisehoana insulated, ho an'ny milina fanontana plastika, milina fanaovana hoditra, faritra ankapobeny
- Roller vita amin'ny fingotra polyurethane - tanjaka mekanika avo lenta sy fanoherana fitafiana, fanoherana ny fahanterana ary fanoherana ny menaka dia tena tsara koa, matetika ampiasaina amin'ny fanaovana taratasy, fibre simika, fanodinana hazo, milina fanodinana plastika.
- Silika vita amin'ny fingotra - hampiasa ny fanoherana ny hafanana avo lenta, ny ozone, ny inert simika ary ny plastika tsy adhesive ho an'ny fanodinana mafana ny vokatra viscous, toy ny fihodinan'ny polyethylene, ny embossed, ny fanontana ary ny fandokoana ary ny sarimihetsika sy ny lamba fonosana, ny plastika mitambatra, ny milina fanodinana corona, dia ampiasaina ihany koa amin'ny famokarana siramamy sy famoahana ireo horonan-tsolika famahanana masinina fonosana ary famokarana tsy tenona.
- Roller fingotra flororine - hafanana mahery vaika, menaka, asidra, toy ny fampisehoana, fanoherana ny fitrohana entona, insulation elektrika, fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny lelafo, mahazaka akanjo, dia tena tsara ho an'ny fitaovana famonoana manokana.
- Roller ho an'ny milina fanontana nomerika malalaka.
- Roller ho an'ny milina fitotoana taratasy.
- Roller ho an'ny milina lamba.
- Roller ho an'ny milina plastika.
- Roller ho an'ny rafitra mpampita plywood.
- Roller ho an'ny indostrian'ny ahy sy sivana.
Teo aloha: Autoclave- Karazana fanafanana herinaratra
Manaraka: Rubber Roller Alloy Fitotoana Vary Device
Milina fanaovana kodiarana vita amin'ny fingotra
Vary fampifangaroana fingotra (Motors roa & Output roa)
Sivan-tsiranoka / fantsom-pifandraisana
Fitaovana famolahana fehin-kibo vita amin'ny fasika